Ubutofotofo kunye ne-villa yeeholide yabucala - I-Airbnb
Ubutofotofo kunye ne-villa yeeholide yabucala
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJames
Indawo entle yokwenyani, enobunewunewu kunye nekhaya leholide yabucala imiswe phakathi kwehlathi elidlamkileyo kunxweme olumangalisayo lwase-Sabah, eMalaysian Borneo. Inika ubumfihlo obupheleleyo kunye nokubodwa, iHibiscus Villa inokwamkela ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezili-9. Ukuhlala eHibiscus Villa ngumzekelo woxolo, ukuphumla kunye nokubaleka kubomi obuxakekileyo.
I-villa iyamangalisa. Yakhelwe ngokuphumla engqondweni, ineendawo zokuhlala ezinkulu ezivulekileyo ngaphakathi nangaphandle. Indawo ekugxilwe kuyo kwipropathi yi-18 yeemitha ubude be-Infinity pool enabela kwi-villa, idala into emangalisayo.
Nje ukuba ungene kwi-villa udibana nemibono ephefumlayo kunye nedama elimangalisayo elingenasiphelo, elingena kwisakhiwo ukwenza into emangalisayo yangaphakathi. Ifakwe kwilitye lendalo, kunye neendawo ezinzulu kunye nezingekho nzulu, ichibi elikhulu lokuqubha liyonwabile kumntu wonke, nokuba kukuzonwabisa okanye ukuhamba kwasekuseni. Kukwakho nedama lokubhexa elahlukileyo.
Ngaphambili nasecaleni kwendlu kukho ingca yengca enokhetho lwe-gazebos yokuphumla, yokutyela kunye ne-BBQs.
Izitiya zetropikhi ezinomhlaba zintle kwaye phakathi kwemithi yekhokhonathi kukho uluhlu lwezityalo ezingaqhelekanga kunye neentyatyambo ezibandakanya i-hibiscus, iibhanana zokuhombisa, intaka yeparadesi, ijinja, isundu esibomvu kunye nephuzi, iiorchids, iiferns zemithi kunye nezinye ezininzi.
Ukusuka ngaphambili kwivilla, indlela erhabaxa ijikela ezantsi ehlathini isiya kunxweme oluzolileyo olunesanti emhlophe ecaleni koLwandle lwase China.
Uxolo kwaye ukude kuyo yonke into, kodwa yimizuzu emi-5 nje yokuqhuba ukusuka kukhetho oluncinci lweendawo zokutyela zasekhaya kwindawo yabakhenkethi abasakhulayo yeNcam yeBorneo.
Kwimizuzu eyi-10-15 yokuhamba kukho indawo yokutyela enkulu yasekuhlaleni ecaleni kolwandle olumangalisayo.
Ngexesha lokuhlala kwakho ndinxibelelana kancinci. Nangona kunjalo, abasebenzi be-villa bakhona ngamaxesha onke kwaye ndifumaneka ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kudat